နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် (တတိယနေ့) – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် (တတိယနေ့)
(၁-၅-၂၀၁၉ ရက်၊ ဆီရမ်ရိမြို့)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ၀၉၃၀ နာရီတွင် မြန်မာအထူးလေယာဉ်ဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဖနောင်ပင်မြို့မှ ဆီရမ်ရိမြို့သို့ ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။
ဆီရမ်ရိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဆီရမ်ရိပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. Tea Seiha နှင့်ဇနီး၊ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပါသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Prak Sokhonn နှင့်အတူ ဆီရမ်ရိပြည်နယ်ရှိ Angkor Watt နှင့် Bayon Temple ကျောင်းတော်များသို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပြီး Angkor Sokha Resort ဟိုတယ်တွင် ဆီရမ်ရိပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. Tea Seiha နှင့်ဇနီးတို့က တည်ခင်းဧည့်ခံသော နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်ပြီးဆုံး၍ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၅၀၀ နာရီတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမြို့မှ နေပြည်တော်သို့ မြန်မာအထူးလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။
ဆီရမ်ရီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Dr. Kantha Phavi ၊ ဆီရမ်ရိ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. Tea Seiha နှင့်ဇနီး၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်စိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Sok Chea နှင့်တာဝန်ရှိသူများက ပိုဆောင်နှုတ်ဆက်ကြပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြရာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်နှင့် ဇနီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဒုတိယ ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ဝင်းဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဟုန်လျန်နှင့်ဇနီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီးယားသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ Ms Dy Yoeun နှင့် တာဝန်ရှိသူများက နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။